Ònye bụ Setan? | Ihe Baịbụl Kwuru
Ònye bụ Setan?
“Agwọ mbụ ahụ, onye a na-akpọ Ekwensu na Setan, . . . na-eduhie elu ụwa dum mmadụ bi.”—Mkpughe 12:9.
Ụfọdụ ndị na-ekwu na Setan bụ ihe ọjọọ dị n’ime onye ọ bụla. Ndị ọzọ ana-ekwu na ọ bụ mmadụ bụ Ekwensu. Ha na-asịkwa na onye kwe, ya esu.
Baịbụl kwuru na Setan abụghị ihe ọjọọ dị n’ime mmadụ. Mmadụ abụghịkwa Ekwensu. Ekwensu bụ mmụọ. Ọ bụbu mmụọ ozi Chineke. Ma, o mechara nupụrụ Chineke isi, na-agbakwa ya mgba okpuru. Baịbụl kwuru na ọ bụ Setan “na-achị ụwa a.” (Jọn 12:31) Ọ na-eji “ihe ịrịba ama ụgha” eduhie ndị mmadụ.—2 Ndị Tesalonaịka 2:9, 10.
Baịbụl kwuru na o nwere ụbọchị Chineke na Setan kwurịtara okwu n’eluigwe. Ọ bụrụ na Setan bụ ihe ọjọọ dị n’ime onye ọ bụla, ọ pụtaranụ na ihe ya na Chineke kwuru okwu bụ ihe ọjọọ dị n’ime ya. Ma, ị manụ na nke a agaghị eme eme n’ihi na Baịbụl kwuru na Chineke zuru okè, bụrụkwa onye ezi omume. (Diuterọnọmi 32:4; Job 2:1-6) Nke bụ́ eziokwu bụ na o nwere onye bụ́ Setan, ọ bụghị ihe ọjọọ dị n’ime onye ọ bụla. Mmadụ abụghịkwa Ekwensu.
GỊNỊ MERE I KWESỊRỊ IJI AMATA ONYE Ọ BỤ?
Setan chọrọ ka i chee na ya adịghị. Ọ na-eme ka onye omekome. Ị manụ na onye omekome anaghị achọ ka a mata onye ọ bụ. Ihe mere o ji eme otú ahụ bụ ka o nwee ike ịna-eme ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ị chọghị ka Setan nweta gị, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịghọta na ọ dị adị.
Olee ebe Setan bi?
‘Ahụhụ ga-adịrị ụwa, n’ihi na Ekwensu agbadatawo n’ebe unu nọ.’—Mkpughe 12:12.
Ọtụtụ ndị na-ekwu na ọkụ ala mmụọ dị n’ime ime ala. Ha na-asị na ọ bụ n’ebe ahụ ka Setan bi. Ndị ọzọ na-ekwu na o bi n’ime ndị ajọ mmadụ.
Baịbụl kwuru na Setan bụ mmụọ. Nke a pụtara na anyị agaghị ahụli ya anya. Mgbe Setan nupụchaara Chineke isi, ọ hapụrụ ya ka ọ ka na-abịa n’ebe ya na ndị mmụọ ozi ya bi. Ọ na-abụ ya gaa, ya alọta. (Job 1:6) Ma ugbu a, ọ gaghị agali ebe Chineke bi n’ihi na a chụdatala ya na ndị mmụọ ọjọọ ya n’ụwa ebe a.—Mkpughe 12:12.
Nke a ọ̀ pụtara na o nwere otu ebe Setan bi, nọrọ n’ebe ahụ na-akpa ike n’ụwa? O nwere ike ị gụtala na Baịbụl na ocheeze Setan dị n’otu obodo a kpọrọ Pagamọm. (Mkpughe 2:13) Ihe mere Baịbụl ji kwuo otú ahụ bụ na ndị ebe ahụ na-efesi Setan ike. O nweghị obodo a ga-asị na ọ bụ ebe Setan bi. Kama, ihe Baịbụl kwuru bụ na ọ bụ ya nwe “alaeze niile nke elu ụwa mmadụ bi.”—Luk 4:5, 6.
Setan ò nwere ike imesi ndị mmadụ ike ma ọ bụkwanụ jiri ha na-arụ ọrụ?
“Ụwa dum dị n’aka ajọ onye ahụ.”—1 Jọn 5:19.
Ọtụtụ ndị ekwerela ka Setan duhie ha. Ọ bụ ya na-achị ha. (2 Ndị Kọrịnt 11:14) Ọ bụ ya mere na ụmụ mmadụ enwebeghị ike ime ka ụwa a dị mma.
Baịbụl kwukwara gbasara ndị ụfọdụ Setan ji kwara ngwá ọrụ nakwa ndị nke o mekpara ahụ́.—Matiu 12:22; 17:15-18; Mak 5:2-5.
Atụla Setan ụjọ. Ọ bụrụ na ị chọghị ka Setan nweta gị ma ọ bụ jiri gị kwara ngwá ọrụ, i kwesịrị ịma otú o si na-eji ndị mmadụ arụ ọrụ. Nke a ga-eme ka ị mara atụmatụ ya. (2 Ndị Kọrịnt 2:11) Ị na-agụ Baịbụl, ị ga-ama otú Setan si eji aghụghọ na-eduhie ndị mmadụ. Ọ ga-emekwa ka ị ghara ikwe ka o duhie gị.
Mebie ihe ọ bụla jikọrọ gị na ndị mmụọ ọjọọ. (Ọrụ Ndịozi 19:19) Tụfuo ọtụmọkpọ ọ bụla i nwere. Tụfuokwa akwụkwọ, vidio, egwú, na ihe ọ bụla ọzọ na-akwado ime mgbaasị na ịgba afa.
Baịbụl kwuru, sị: “Na-eguzogidenụ Ekwensu, ọ ga-agbapụkwa n’ebe unu nọ.” (Jems 4:7) Ọ bụrụ na i mee ihe a Baịbụl kwuru, ọ ga-esi ike Setan eduhie gị.—Ndị Efesọs 6:11-18.
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Setan?
mailto:?body=Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Setan?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102013204%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Setan?